Ubuninzi beNtengiso xa kuthelekiswa noBuqu | Martech Zone
Ukuba ube ngumfundi womsebenzi wam, uyazi ukuba ndingumchasi we Ukuqobisana ukufana kwintengiso. Rhoqo, njengakwimeko yokwenziwa komntu, ayisiyiyo ukukhetha kwesicwangciso oza kusisebenzisa, kodwa ukuba uza kusisebenzisa nini isicwangciso ngasinye. Kukho isigqebelo sokuba le infographic ukuthengisa ngobuninzi… Kodwa unyanzela ukuphucula ukwenziwa komntu. Zombini zisebenza kakuhle xa zisebenzisa ngokufanelekileyo.
Ngaxa lithile, konke ukuthengisa kwakuyinto yobuqu. Umthengisi wendlu ngendlu, umthengisi webhanki, kunye nehaberdasher bonke babebazi abathengi babo ngamagama. Iziqwenga zeposi ezithe ngqo zashicilelwa kwiinguqulelo ezahlukeneyo ukubhenela kwijografi yabathengi okanye ukhetho lwabo. Ke ngokufika kwe-imeyile kunye neewebhusayithi, abathengisi baqala ukuthembela kubuchule bokuthengisa ngobuninzi bokuhambisa umyalezo omnye kuwo onke amajelo amatsha edijithali. Ukusuka kwiMonetate Ukuthengiswa kweMassographic Mass ngokuchaseneyo nokwenza ubuqu
Jonga le infographic kwaye uqiniseke ngokukhuphela i-ebook ye-Monetate, The Iinyani zokwenza ubuqu kwi-Intanethi. Iveliswe ngokudibeneyo ne-Econsultancy, uphando lwabo olulodwa luphonononga oko kuqhuba ukubhalwa kwe-intanethi, amaqhinga kunye neentlobo zedatha ezisetyenziselwa ukulungelelanisa amava abathengi kwi-Intanethi kunye nezithintelo kwimpumelelo.
tags: ukuthengisa ngobuninzii-monetateubuntu onlineNgokwezifiso
I-Curalate: Ukwenza uKhuseleko lwezeNtlalontle lusebenze kwiiBrand
Meyi 8, 2013 kwi-5: 47 PM
Xa iinkampani zisebenzisa imithombo yeendaba zentlalo, ukuzenzela kufuneka kube yeyona nto iphambili. Imidiya yokuncokola imalunga nokuthethathethana kunye nomntu ukusebenzisana nomntu. Ukuba iinkampani azizami ukuzibandakanya nomthengi, baya kuphulukana nazo.